Anyanwụ inverter, Ups Ups, Hybrid Inverter - Soro
Hybird Anyanwụ Inverter
Gbanyụọ onye ntụgharị nke Gird
High Frequency online gbasie
Ogologo oge n'ịntanetị
Mmepụta ụlọ ọrụ
Ngwọta ike ekwentị
48VDC Solar Telecom ike usoro
SORODEC na-enyocha ma na-achọpụta ụwa ọhụrụ nwere ume na ngwọta na-eto eto mgbe niile.
AKWVERKWỌ AKW .KWỌ
Ezubere ndị ntụgharị Sorotec maka ngwa maka ụlọ obibi, azụmaahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ndị na-atụgharị anyị gụnyere ndị na-agbagharị mmiri ikuku dị ọcha, ndị na-agbagharị grid, ndị na-atụgharị ngwakọ na ndị na-agbanwe ngwakọ 3 na-eji teknụzụ kachasị ọhụrụ, nke nwere ike imezu ihe ọtụtụ ndị ahịa chọrọ, yabụ ndị ahịa nwere ike inweta oke akụkụ nke ahịa mpaghara. Gaa na anyị ka anyị jụọ maka ndị na - agbanwe agbanwe nke anyị nwere ntụkwasị obi. Anyị nwere ngalaba injinia siri ike iji nye nkwado teknụzụ
SOROTEC na-enye ọtụtụ ngwaahịa UPS ike ngwaahịa nwere ntụkwasị obi dị elu iji zute ọtụtụ ihe ndị ahịa ụwa chọrọ. sorotec UPS na-enye nchebe zuru oke maka ngwa dị egwu gụnyere ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gọọmentị, ụlọ ọrụ, ụlọ, ahụike, mmanụ na gas, nchekwa, IT, ebe data, njem na usoro ndị agha dị elu. Ihe omuma anyi di iche iche, imeputa ihe na ihe omuma di iche iche bu ihe omuma nke oma tinyere Modular UPS, UPS UPS, RPS UPS, UPS UPUP, UPS Online, UPS Ugboro UPS, Ugboro UPS Ugboro nke ejiri n’uwa nile.
Telecom Ngwọta Ngwọta
SOROTEC lekwasịrị anya na ike ngwọta maka telecom na romote ebe ọ bụ na 2006. Sistemụ Aha Aha: SHW48500 ， Key feature ： Hot plọg, modular, niile na otu imewe ， N + 1 redundancy Protection Degree: IP55 ， Dustproof & Waterproof ， Wuru-Na MPPT ， DC mmepụta voltaji: 48VDC ated gosiri Ugbu a: 500A ， Smart remote monitor system。
DYNAMIC Akwụ ụgwọ HARMONIC SOROTEC Onye na-arụ ọrụ Harmonic Filter nwere ike ịchọpụta ụgwọ nke 2rd na 50th, nkwụghachi ụgwọ nwere ike ịhọpụta nke ndị ahịa, nkwụpụta nkwụnye ụgwọ ugbu a na-agbaso usoro mgbanwe nke nkwekọrịta, ewepụtara maka ogo ike ndụ.
MPP anyị na-etinye ọgụgụ isi kachasị ike nsuso teknụzụ teknụzụ.it na-akwado ụdị batrị lead-acid gụnyere mmiri 'AGM' na batrị gel
N'ime afọ iri gara aga, sorotec na-emepe emepe teknụzụ batrị lithium, na-emepụta azịza ohuru ma na-etinye teknụzụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere batrị lithium na-agbanye mgbidi, batrị lithium batrị, batrị nkwukọrịta, batrị lithium lithium, batrị lithium UPS na ike. lithium batrị ngwọta. Ihe ngwọta batrị anyị lithium bụ ndị a ma ama na nkwukọrịta mgbasa ozi ụwa, ike anyanwụ, ọgwụ, ịntanetị nke ihe na ahịa ụgbọ eletrik, yana nwee nnukwu ihe achọrọ maka akụrụngwa batrị na akpaaka.
REVO VMII Series Off Grid Energy Nchekwa Inverter
Nlereanya: 3-5. 5kW Mgbawa Niile: 230VAC Frequency Range: 50Hz / 60Hz Dị ọcha, nke na-enwu ọkụ na-agbanwe ike ihe na-akpata 1 Ihe yiri ya na 9 nkeji High PV ntinye voltaji batrị nnwere onwe imewe Bullt-in 100A MPPT chaja anyanwụ Batrị equalization ọrụ iji bulie arụmọrụ batrị ma gbasaa ndụ ndụ Wuru n'ime mgbochi mgbochi maka gburugburu obi ọjọọ.
+ Ele ngwaahịa
REVO-II Series Ngwakọ Ike Nchekwa Inverter
ouch ihuenyo ngosi. PV na ịba uru na-ebu ibu n'otu oge (canbeset). Mmepụta ike ihe PF = 1.0. Gbanyụọ na Gbanyụọ na nchekwa nchekwa. Ike eme ndekọ, ndekọ ndekọ, akụkọ ihe mere eme ọmụma na faultrecord. Nhazi na nchara nchara. AC na-ebido mmalite ma kwụsị oge. Ngwaọrụ Wi-Fi dị na mpụga. Aghota ọrụ ruo 9 nkeji. Ejikọtara na batrị nhọrọ. Wide ntinye ntinye PV Wide 120-4 50VDC. MAX PV Array ike 5500W. Anyanwụ na ịba ụba na-enye ike ibu Mgbe ike anyanwụ adịghị ezu iji bulie. Ihe mmetụta CT ga-enyocha ike oriri nke usoro ahụ ma hụ na enweghị ike PV gafere na Grid.
MPPT Solar Charge njikwa
Mkpịsị aka aka Unlimited njikọ njikọ Dakọtara na batrị lithium Itelligent Oke Ike Point Nsuso teknụzụ Kwekọrọ maka PV sistemụ na 12V, 24V ma ọ bụ 48V Atọ ogbo na-ebugharị arụmọrụ batrị Oke arụmọrụ kachasị ruo 99.5% Batrị okpomọkụ ihe mmetụta (BTS) na-akpaghị aka na-enye ụgwọ okpomọkụ Nkwado ụdị dị iche iche nke ndu-acid batte ries tinyere mmiri, AGM, na batrị batrị Multifunction LCD gosipụtara ozi zuru ezu.
REVO VM III Usoro Ntugharị Nchekwa Ike Anyanwụ
Mmepụta ike ihe PF = 1.0. Configurable AC / Solar Charger butere ụzọ site na ntọala LCD. Dakọtara na mains voltaji ma ọ bụ jenerato ike. Bufee, N'ime okpomọkụ, Short circuit nchebe. Ngwakọta interface Bluetooth na gam akporo App. Na-akwado ọrụ USB On-the-Go. Edebere ọdụ ụgbọ mmiri echekwabara (RS-485, CAN-BUS ma ọ bụ RS-232) maka BMS. Nnwere onwe batrị. Ọrụ-enyi na enyi LCD ọrụ. Replaceable ofufe imewe.
SHW48 500 Solar Power System maka ọdụ ụgbọ Telecom
MPS9335C II Series N + X Modular UPS 50-720KVA (3Ph na / 3Ph si)
Arụ ọrụ dị ukwuu karịa 97%. Na nkwado modul nwere ọgụgụ isi na-ehi ụra ọrụ, ọ nwere ike melite n'ozuzu arụmọrụ nke obere ibu. Ultra wide input voltaji ugboro nso, ntinye voltaji nso: 138- 485V; ndenye ugboro ole nso: 40-70Hz, imeghari ka ike ike okporo gburugburu ebe obibi, ịgbatị ndụ batrị. Nọmba batrị nwere ike idozi, kwado batrị 32-44 nwere ike idozi, mgbe wepụ batrị batrị, ikpe batrị fọdụrụ na-aga n'ihu na-enye ike maka sistemụ. Modular redundant akụkụ ahụ mapụtara imewe, ọ dịghị otu isi nke ọdịda. Power modul, uzo akara modul na uzo ike modul nwere ike na-akwado na-ekpo ọkụ gbanwee. Mmepụta PF nwere ike iru 1, nke 11% karịa karịa karịa UPS ọdịnala A na-ejikọ ọsọ ọsọ ọsọ na SCR maka ntụgharị ntụkwasị obi dị elu. Enwere ike dochie ndị na-arụ ọrụ DC na ndị na-arụ ọrụ AC iche iche, na-echekwa usoro ndụ niile ọnụ A ga-eji otu batrị ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'otu njikọ.
Solar Inverter Ileba
E guzobere ụlọ ọrụ na
Shenzhen Soro Electronics Co., Ltd. bụ a elu-tech enterprise ọkachamara ike ngwá electronic ngwaahịa mmepe na production.Our ụlọ ọrụ e guzobere 2006 na a aha isi obodo nke 5,010,0000 RMB, mmepụta ebe 20,000 square mita na 350 ọrụ. Companylọ ọrụ anyị agafeela ISO9001 ...
&Lọ R & D: Shenzhen, China
Manufacturing akụrụngwa: Shenzhen, China
AKW QKWỌ KWESLR.
sorotec nwere afọ 15 na -emepụta ihe na-arụ ọrụ ike
OT A Anyanwụ Ike Arụ ọrụ
Ma ọ bụ mmiri dị ka ogwe igwe, batrị okirikiri miri emi ma ọ bụ ntụgharị na usoro nhazi; anyị nwere
ụdị na nkwado iji hụ na ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ezigbo uru maka ego, kamakwa ọkaibe na nkwado ahịa.
Mmebi & Smart ume Inverter
2021 Nchịkọta ntụgharị ntụgharị kachasị ewu ewu
2021 Ihe ngbanye igwe na-ewu ewu nke igwe na-ewu ewu nke na-arụ ọrụ maka mgbakọ nke anyanwụ, na-agbanwe ihe ntụgharị anyanwụ, ...
Abụọ / 26/2021
126th Canton Ngosi
On Oct 15, dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ahịa nkwalite nyiwe maka Chinese ụlọ ọrụ iji mụbaa ahịa ụwa, Canton Fair na Guangzhou lekwasịrị anya pụta ìhè ọhụrụ chụpụrụ, na "nọọrọ onwe ha ika" ghọrọ a elu-ugboro ole okwu nke Canton Fair. Xu Bing, onye nkwuchite nke t ...
Ihe ngosi ohuru nke MPPT Solar Charge Controller
Key Akụkụ: Aka bọtịnụ Unlimited njikọ jikọtara Na-adaba na batrị lithium Itelligent Ike Ike Point Nyochaa teknụzụ Kwekọrọ maka PV sistemụ na 12V, 24V ma ọ bụ 48V Usoro nke atọ na-ebuli arụmọrụ batrị Oke kachasị arụmọrụ ruo 99.5% Batt ...
OZI OZI REVO VM II Series Gbanyụọ Grid Energy Nchekwa Inverter
Ihe Nlereanya Ngwaahịa: 3-5. 5kW N voltage Volum: 230VAC Frequency Range: 50Hz / 60Hz Njirimara Njirimara: uredị ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-arụpụta ihe na-akpata ikike 1 Ihe jikọrọ ya na 9 nkeji High PV input voltage nso Batrị nọọrọ onwe ya ...
Owuwu B22, Tantou West Industrial Park, Songgang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, 518105 PRChina